डा अशेष ढुंगाना
दमबारे सचेतना फैलाउनका लागि ‘ग्लोबल इनिसिएटिभ फर आस्थमा’ नामक संस्थाले प्रत्येक वर्षको मे महिनाको पहिलो मंगलबारलाई विश्व दम दिवसका रुपमा मनाउने गरेको छ।
दम श्वासप्रश्वास सम्बन्धी दीर्घ रोग हो। जसले बालबालिकादेखि वृद्ध–बृद्धासम्मलाई समान रुपमा असर गर्न सक्छ। सामान्यता यो रोग पुरुषको तुलनामा महिलामा बढी देखिन सक्छ। समयमै निदान र उपचार हुन नसकेको खण्डमा यसले सबै उमेर समूह र लिंगका मानिसलाई दीर्घ प्रभाव पार्न सक्छ।
11 संगठनका अनुसार संसारमा २३ करोड मानिसमा दम रोग छ। दम रोगका कारण बर्सेनी हजारौंले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थिति छ। विश्वमा दमका कारण हुने जम्मा मृत्युमा असी प्रतिशत नेपाल जस्ता अति कम र विकासोन्मुख देशमा हुने गरेको छ।
लक्षण : दमका बिरामीलाई सास फेर्न अप्ठ्यारो महसुस हुनेगर्छ। साथै सास फेर्दा छातीबाट घ्यार–घ्यार आवाज आउँछ। सुरुसुरुको अवस्थामा यस्तो लक्षण हप्तामा वा दुई हप्तामा या महिना–दुई महिनामा एक पटक हुने गर्छ। तर, रोग जटिल हुँदै गएको खण्डमा दिनहुँ यस्तो समस्या आइपर्छ। धेरैजसो दमको समस्या राति वा बिहानीपख वा धुवाँधुलोको सम्पर्कमा आएको बेला देखिन्छ। त्यसका अलावा सामान्य रुघाखोकी भएको बेला वा भाइरल इन्फेक्सन भएको अवस्थामा पनि दम जटिल बन्दै जाने हुन्छ।
‘इन्हेलर’ के हो ?
सामान्यतः इन्हेलर यन्त्र तीन प्रकारका छन् १. एमडिआई (मिटर डोज इन्हेलर) २. डिपिआई (ड्राइ पाउडर इन्हेलर) र ३. नेबुलाइजर (नेबुलाइजरको प्रयोग धेरैजसो जटिल र अस्पताल भर्ना भएको अवस्थामा गरिन्छ)।
एमडिआई र डिपिआई सजिलोसँग बोक्न र प्रयोग गर्न सकिने भएकाले घरमै प्रयोग गरिन्छ। मिटर डोज इन्हेलरमा औषधि ‘स्प्रे’को रुपमा राखिएको हुन्छ। त्यस्तै ड्राइ पाउडर इन्हेलरमा औषधिको धुलो क्याप्सुलमा राखिएको हुन्छ। जुन इन्हेलर यन्त्रद्वारा लिइन्छ। यसका अलावा एमडिआईसँग श्वासको राम्रो संयोजन गर्न नसक्ने बिरामी र वृद्धावस्थाका व्यक्तिले ‘स्पेसर’ पनि सँगै प्रयोग गर्न सक्छन्।
जोगिने उपाय: दमको कारक तत्व पत्ता नलागिसकेको हुनाले यसबाट पूर्णरुपमा जोगिने उपाय विकास हुन सकेको छैन। तथापि रोग लागिसकेकाहरूले समयमै यसको निदान र उपचार गरेमा फोक्सोमा हुने दीर्घ प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, यसका जोखिमहरूबाट बच्नेतर्फ सोच्नुपर्छ। जस्तै, धुवाँधुलोको वातावरणबाट टाढा रहेर र मास्कको प्रयोग गर्ने, रुघाखोकीको समयमै उपचार गर्ने, तनावलाई न्यूनीकरण गर्ने जस्ता उपायले दम बल्झिनबाट जोगिन सकिन्छ।